Wiil Trump dhalay oo qirtay inuu qareen Ruusha si qarsoodi ah ula kulmay - BBC News Somali
Wiil Trump dhalay oo qirtay inuu qareen Ruusha si qarsoodi ah ula kulmay
Image caption Wiilka Madaxweyne Trump dhalay ee qirtay kulanka sirta ah
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in wiilka uu dhalay madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, uu sannadkii hore aqbalay inuu la kulmo qareen Ruush ah oo xidhiidh la leh Aqalka Kremlin-ka, ka dib markii loo balan qaaday in la siin doono xog dhaawac gaadhsiinaysa Hillary Clinton.
Donald Trump Jr ayaa sheegay inuu la kulmay Natalia Veselnistskaya laakiin aanu "xog macno leh" oo ku saabsan Clinton ka helin.
Kulankaa waxaa kale oo ka qayb galay wiilka madaxweynuhu soddoga u yahay ee Jared Kushner iyo madixii ololaha doorashada Trump ee xiligaa, Paul J Manafort.
Saraakiil Maraykan ah ayaa baadhaya eedaha la sheegay ee ah in Ruushku farogeliyey doorashadii Maraykanka.
FBI-da iyo aqalka Congress-ka ayaa labaduba doonaya in ay ogaadaan bal in ay dhacday in madaxdii ololaha Trump ay si qarsoodi ah u fulinayeen shirqool la sheegay in laga soo maleegay Kremlin-ka. Haseyeeshee baadhitaannada socdaa weli may soo bandhigin caddaymo muujinaya in gacan saarkaa sirta ahi jiray.
Kulanka dhexmaray Vaselnitskaya iyo wiilka madaxweynuhu dhalay ayaa ka dhacay 9 Juun 2016 daarta Trump Tower ee ku taal magaalada New York, waxaanay ahayd laba todobaad uun ka dib markii Donald Trump ku guulaystay musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga.
Waxa la rumaysanyahay inuu ahaa kulankii ugu horeeyey ee la xaqiijin karo ee si gaara ay u yeeshaan muwaadin Ruush ah iyo xubno ka tirsan la taliyeyaasha ugu dhaw madaxweyne Trump.
Wargeyska New York Times waxa kale oo uu sheegay in saddex la taliye oo haatan ka tirsan Aqalka Cad warbixin laga siiyey kulankaa, laba sarkaal oo kalena kaba warqabeen inuu dhacayo, sida ay xaqiijiyeen dadka wargeysku xogta ka helay.